Dalka New Zealand oo Markii Kowad dad saladii Jimcaha ku Tukanayay masaahid la laayay
Qof hubaysan oo weeraray masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaan wali gacanta lagu dhigin, booliiska ayaana ka digay ninkaas.
Qof goob jooge ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay dad dhinteen. Booliiska ayaa dadka uga digay aagaas, waxaana la isku gadaamay oo ilaalo la geeyay iskuullada iyo isbitaallada.
Dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in ay orad kaga baxsadeen rasaastii dhacaysay.
Muuqaal aan la xaqiijinin saxnimadiisa ayaa soo baxay, muuqaalkaasina wuxuu tilmaamaya ninka weerarka gaystay oo isduubaya isaga oo rasaas furaya.
Mohan Ibrahim oo ku sugnaa dhulka masjidka ayaa warbaahinta Herald ee dalka New Zealand u sheegay “n markii hore ay u qaateen in shanqartu ay koronto tahay, balse dadkii ayaa billaabay in ay kala yaacaan.
“Saaxiibbaday ayaa wali masaajidka ku jira”
“Saaxiibbaday ayaan wacayay balse waxaa jira kuwo aanaan wali is maqlin. Nolosha saaxiibbaday ayaan u baqayaa.”
Herald ayaa ku warramaya in qofka weerarka gaystay loo malaynayo in uu Australia u dhashay, kaas oo qoray ujeedadiisa.
Ninkaas ayaa sheegay in uu taageerayo afkaarta midigta fog iyo in uu ka soo horjeedo soo galootiga.
Dhacdadan ayaa la sheegay in ay ka dhacday masaajidka Al Nuur oo ku yaalla bartamaha magaalada Christchurch.
Askarta ayaa sidoo kale fagaaraha Cathedral ka kexeeyay kumannaan carruur ah oo dhigayay mudaaharaad ay ku dalbanayaan in wax laga qabto isbadalka cimilada adduunka.
Waxaa jira warar kale oo sheegaya in dad laga daad gureeyay masaajid kale.